​किन लाग्छ हाँसो ? दिमागमा पनि लाग्छ काउकुती !
Saturday, 14 Jul, 2018 10:51 AM
हाँसो किन लाग्छ भन्ने विषयमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भएका छन् र ती अनुसन्धानहरूले थुप्रै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । तीमध्ये तीनवटा सिद्धान्तहरू वैज्ञानिक जगतमा सर्वमान्य छन् । ती हुन् बेमेलको सिद्धान्त (Incongruity theory) श्रेष्ठताको सिद्धान्त, (Superiority theory) र राहतको सिद्धान्त (Relief theory) ।
माथि दिइएको चुट्किला सुनेर हाँसो लाग्ने प्रक्रिया बेमेलको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । वैज्ञानिक तथा दार्शनिकहरुका अनुसार कुनै अप्रत्याशित कुरा वा दैनिक जीवनसँग मेल नखाने कुरा देख्दा वा सुन्दा हामीलाई हाँसो लाग्छ ।